Iimveliso abavelisi - China T series multi-parameter colorimeter factory & ababoneleli
Umbala wombala ophathwayo
Q Series Umbala wombala ophathwayo
T Uthotho lweeParameter ezininzi zeParameter
Indalo esingqongileyo- Ukuvavanywa kwamanzi kwenkunkuma
Ukubonelelwa kwaManzi ngeSixeko
ILebhu kunye neMfundo
Pool kunye Spa
Ukutya kunye neZiselo
T-CP40 Colourimeter eziphathekayo ...
TA-98 UV ebonakalayo Spectropho ...
Isicazululi samanzi esikwi-K600
Q-CL501 Colourimete ephathekayo ...
T-6800 Iiparamitha ezininzi eziphathwayo Umbala wombala
I-T-6800 yeeparamitha ezininzi zokuhlalutya amanzi sisixhobo esinamandla, esinokuthenjwa sokuhlalutya izixhobo, In-set inani leeparamitha, ukusebenza ngokulula, ukuvavanya ngokukhawuleza, cinezela nje zero kwaye ukongeze izixhobo ze-reagent, cinezela funda emva koko ubonise ukujonga ngamehlo.
I-algorithm ehlangeneyo yokuchithwa kunye nokuhanjiswa ayenzi nje kuphela ukuba umlinganiselo we-turbidity ephantsi uzinze ngakumbi, kodwa uyaqonda kwakhona ububanzi bovavanyo lwesixhobo (iindawo eziphantsi, eziphakathi kunye eziphezulu). ngovakalelo oluphezulu.
I-T-SP80 Pooltest Colourimeter ephathekayo
I-T-SP80 yoyilo ngokukodwa lwedama lokuqubha elalisebenzisa ukuvavanya into yokuhlola eyimfuneko echibini njenge-urea, iklorine yasimahla, i-pH njalo njalo. kwaye sisixhobo sokuqala sokuvavanya urea ngaphandle kokuhlamba amanzi emhlabeni. Kwaqonda ukuvavanywa kunye nokuhlolwa kwindawo yetekhnoloji yovavanyo oluphambili ye-urea, akukho sidingo sokuhlamba amanzi, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, imizuzu emihlanu inokufumana iziphumo.
I-T-CP40 Colourimeter ephathekayo yaManzi okusela
Isicazululi soMgangatho waManzi i-T-CP40 sisenzo esinamandla, esithembekileyo sokusebenza kwezixhobo ezikhethekileyo zohlalutyo lwamanzi, ezihlanganisiweyo zomoya, i-chlorine eseleyo, i-chlorine dioxide, i-pH, umbala kunye nezinye iiparameter zomgangatho wamanzi oqhelekileyo. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zovavanyo lobulunga bamanzi ngotyalo-mali oluncinci. Isixhobo sixhotyiswe ngomboniso onemibala emi-3.5-intshi, uyilo olulula nolufanelekileyo luzisa amava asemagqabini omsebenzisi, hayi nje ukufezekisa isidingo sovavanyo lomgangatho wamanzi mihla le, kodwa lukwanokwandisa izinto zovavanyo ngokweemfuno zengingqi. Icwecwe kwaye kulula ukuyiphatha, kulula ukuyisebenzisa, isantya esikhawulezayo kwaye ichanekile.
I-T-CL501C yeChlorine esebenzayo yoMbala wombala
I-T-CL501C izisa abathengi ukhetho olutsha kunye neempawu zokulula, ukukhawuleza, ukuchaneka, njl njl.Yilungele imilinganiselo yesiza okanye ukufunyanwa komgangatho waselabhoratri we-chlorine ekhoyo kwi-chlorine kunye ne-disinfection yeefektri zokutya, izibhedlele, iindawo zogutyulo, amaziko okondla, i-aquaculture, iitanki zentsholongwane, njl. njl.
I-T-AM ye-Aquaculture yeColorimeter ephathekayo
I-T-AM kulula ukuyisebenzisa, ilula, iyakhawuleza, nokuba ngaphandle komntu okhethekileyo osekwe elebhu unokukhawuleza. Ukuhlangabezana neemfuno zemilinganiselo yokufuya elwandle emilanjeni nasemachibini, Sesinye sezixhobo ezifanelekileyo zokubeka iliso kunye nolawulo lwangoku kwi-aquaculture.
Umvelisi kunye nomthengisi wehlabathi wezobuchwephesha obunqamlezayo, obenzelwe uhlalutyo kunye nokubeka iliso emanzini.
I-Shenzhen Sinsche Technology Co, Ltd.